Budata Winamp maka Windows
Free Budata maka Windows (12.21 MB)
Site na Winamp, otu nime ndị egwuregwu mgbasa ozi kacha amasị na nke ejiri eme ihe nụwa, ị nwere ike ịkpọ ụdị faịlụ ọdịyo na vidiyo niile na -enweghị nsogbu ọ bụla.
Noge nrụnye Winamp, ị nwere ohere ịhazi ọtụtụ ntọala metụtara mmemme ahụ dịka ọchịchọ gị siri dị. Ị nwere ike ịhazi ọtụtụ ntọala noge nrụnye, site nụdị ọdịyo na vidiyo ịchọrọ igwu egwu na Winamp wee tinye bọtịnụ igwu egwu na Winamp na bọtịnụ pịa nri Windows.
Njirimara onye ọrụ nke mmemme a bụ otu nime nnukwu ihe kpatara o ji ewu ewu nụwa niile. Ninwe interface ọrụ bara uru nke ukwuu, Winamp na -adọrọ uche ya na bọtịnụ njikwa etinyere nke ọma, ndepụta ọkpụkpọ yana faịlụ ịchọrọ igwu egwu, ntọala nhazi ya na ọtụtụ ndị ọzọ.
Site na ngwa onye ọrụ ọgbara ọhụrụ nke ụdị Winamp 3.0 na mgbe e mesịrị, ụlọ ọrụ ahụ, nke na -enye ndị ọrụ nkwado nke ọtụtụ agba dị iche iche ka ha nwee ike iji ndị egwuregwu mgbasa ozi ha na agba ha chọrọ, maara nke ọma otu esi eme ndị ọrụ obi ụtọ. Noge a, ọ ga -ekwe omume ịchọta isiokwu dịịrị gị ma gosipụta ụdị gị na Winamp, onye mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike ịhazi nke ọma.
Enwere ike igwu egwu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ faịlụ mgbasa ozi niile na -enweghị nsogbu ọ bụla, Winamp emebeghị ka m daa mbà noge ule m ruo ugbu a. Ewezuga ịkpọ faịlụ ọdịyo na vidiyo na diski ike gị, ị nwere ike bido ịge ọtụtụ ọwa redio dị nịntanetị dị mma site na ịpị Winamp ole na ole, nke na -enye nkwado maka ọtụtụ mgbasa ozi redio na ịntanetị.
Ninye ndị ọrụ ọtụtụ nhọrọ ọdịyo na vidiyo, Winamp na -enye gị ohere ijikwa ma hazie ebe ndebe ihe mgbasa ozi gị niile site na nkwado nhazi ya, ihe karịrị 100 ihe anya na ndepụta ọkpụkpọ bara uru.
Site na mmemme na -enye gị ohere ịkwadebe CD egwu nke gị na -abụghị ịkpọ egwu na vidiyo, ị nwere ike chekwaa CD egwu na kọmputa gị nụdị dị iche iche dịka AAC, MP3, WMA na WAV.
Nagbanyeghị onye ọkpụkpọ mgbasa ozi kachasị amasị nahịa, Winamp ga-abụ onye ndu nọhịa ya ogologo oge, nihi ọtụtụ usoro mgbasa ozi ọ na-akwado, nhazi ya dị mfe iji rụọ ọrụ nke ọma, ntọala dị elu na nhọrọ nhazi.
Chọta egwu ma budata egwu ozugbo site na ndị egwuregwu mgbasa ozi
Dakọtara na ụdị Windows niile
Nhazi ahaziri na plugins dị iche iche
Nkwalite mmekọrịta mmekọrịta iPod
Bubata ọba akwụkwọ iTunes gị
Ụlọ ọrụ redio dị nịntanetị
Ntọala nhazi ụda elu
Ugbu a na -akpọ egwu ma ọ bụ atụmatụ egwu vidiyo
Nkwado vidiyo Flash
Lelee ozi egwu na onye na -ese ihe na iyi
Nkwado ọtụtụ asụsụ
Ikike ijikwa ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi gị site na ihe nchọgharị jiri ogwe ngwaọrụ Winamp
Enwekwu UI na nkwado maka mkpuchi album
Ọtụtụ ọwa MP3 Gburugburu nkwado
Nchọpụta mkpado ID3 na -akpaghị aka
Ikike igwu ụdị ọdịyo na vidiyo niile
Ịnweta puku kwuru puku egwu na faịlụ vidiyo efu
Na -ege ntị na ụlọ ọrụ redio AOL
Rịba ama: A ga -akwụsị Winamp na Disemba 20, 2013. Agbanyeghị, ị nwere ike ịga nihu na -ebudata ụdị mmemme kachasị ọhụrụ anyị debere na nchekwa faịlụ anyị na saịtị anyị mgbe ụbọchị a gasịrị.
Nha faịlụ: 12.21 MB
C Media Player bụ sọftụwia ị nwere ike iji dị ka ihe ọzọ karịa ndị egwuregwu mgbasa ozi na kọmputa...
PotPlayer bụ otu nime mmemme ịkpọghachi vidiyo nke dọtara ọtụtụ nlebara anya noge na-adịbeghị anya,...
Plexamp pụtara na myirịta ya na Winamp, nke anyị maara dị ka onye na-egwu egwu mp3 na egwu egwu,...
Soda Player bụ ihe ọkpụkpọ vidiyo dị elu ebe ị nwere ike ịkpọ vidiyo nkọwa gị dị elu. Ị nwere ike...
J. River Media Center bụ ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi dị elu nke na-enye gị ohere ijikwa egwu, vidiyo,...
Emebere mrViewer nke ọma ka ọ bụrụ ihe ọkpụkpọ vidiyo nwere ike ịnweta yana onye na-ekiri ihe...
ALLPlayer bụ ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi multifunctional nke nwere njirimara nke ọtụtụ ndị asọmpi ya...
Soundnode bụ mmemme efu na obere obere nke na-ebute saịtị nkwanye egwu nefu nke SoundCloud, nke...
Metal Player bụ ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi efu na-enyere ndị ọrụ aka ịkpọ egwu na vidiyo. The mfe iji...
Site na aTunes, nke eji Java akwadoro wee mepụta dị ka ebe mepere emepe, ị nwere ike ịge egwu faịlụ...
Site na XMPlay, ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi efu, ị nwere ike mepee ma kpọọ faịlụ nọtụtụ ụdị ewu ewu....
VSO Player bụ ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi efu. Ihe ọkpụkpọ a nwere ike ịgụ ma faịlụ ọdịyo na vidiyo gị....